Iimpawu: UkuBekwa kweliso kuLwazi, Uhlalutyo lweeMvakalelo, kunye neZilumkiso zoKhangelo kunye neMithombo yeendaba yezeNtlalontle | Martech Zone
Iimpawu: UkuBekwa kweliso kuLwazi, uHlalutyo lweeMvakalelo, kunye neZilumkiso zoKhangelo kunye neMedia Media
NgeCawa, uDisemba 13, 2020 Lwesine, Disemba 24, 2020 Douglas Karr
Ngelixa uninzi lwamaqonga etekhnoloji yentengiso yokujonga igama kunye nohlalutyo lweemvakalelo zijolise kuphela kwimithombo yeendaba zentlalo, Iimpawu Ngumthombo obanzi wokubeka iliso kuyo nayiphi na into okanye konke okukhankanyiweyo ngegama lakho kwi-intanethi.
Nayiphi na ipropathi yedijithali edityaniswe kwindawo yakho okanye ekhankanye uphawu lwakho, imveliso, i-hashtag, okanye igama lomqeshwa… ijongiwe kwaye ilandelwe. Kwaye iqonga leBrandmentions libonelela ngezilumkiso, ukulandelela, kunye nohlalutyo lweemvakalelo. Iimpawu yenza amashishini ukuba:
Yakha ubudlelwane obuDibeneyo -Fumanisa kwaye uzibandakanye nabathengi bakho kunye nabaphembeleli abaphambili kwi-niche yakho eya kukunika ukubonakaliswa kwegama elikhulu kunye nokuqonda okukhulu malunga nemakethi yakho ekujolise kuyo.
Zuza kwaye ugcine abaThengi -Yazi umdla wabathengi bakho kwaye wenze iimveliso eziza kuhlangabezana ngqo neemfuno kunye neminqweno yabo. IBrandMentions ikuxelela ukuba ungazazisa phi iimveliso zakho kwaye ufumane abathengi abatsha.
Lawula igama leBrand -Ngokuhlala usazi ukuba ngubani othetha ngawe kunye nokuba yintoni, ufumana amandla okuqonda kunye nokukhusela igama lakho kwintengiso enokhuphiswano olunamandla.
IBrandMentions iye yasisixhobo esingabalulekanga ekulinganiseni impumelelo yamaphulo ethu okuthengisa. Sisebenza nzima ukwakha ulwazi ngebrand brand yethu kwi-intanethi, kwaye asikho esinye isixhobo esiye sazivavanya sifumana ukukhankanywa okuninzi njengeBrandMentions. Siyacebisa kakhulu!
UMark Traphagen, uMlawuli oyiNtloko weBrand Evangelism kwiTempile yeTye
Kunye newebhusayithi, Iimpawu Ukujonga nokubamba imithombo yeendaba zentlalo kwi-LinkedIn, Reddit, Facebook, Foursquare, Twitter, Pinterest, kunye ne-Youtube.
Iimpawu zeBrandionation zibandakanya:
Ukubekwa kweliso kwiWebhu nakwiNtlalo -Yongamela yonke into ethethwayo malunga nenkampani yakho okanye imveliso kuwo onke amajelo abalulekileyo, nokuba yiwebhu okanye imidiya yoluntu. Ukuchazwa kweBrand kukugcina unolwazi ngayo yonke into ebalulekileyo kwimarike yakho kunye nayo nayiphi na into exhunywe kwinkampani yakho, ukubonelela ngezaziso zexesha lokwenene ngqo kwibhokisi yakho engenayo.
Ukuhlola uKhuphiswano- Ukuhlalutya izicwangciso zabakhuphiswano bakho ayisiyiyo inketho. Inxalenye eyimfuneko yesicwangciso sakho sokukhula. Okukhona unokufumana malunga neshishini lakho kunye nabantu abakhuphisana nabo, kokukhona unokufunda, uhlengahlengiso, kwaye ekugqibeleni uchume. Ngoku unganokuhlola abo bakhuphisana nabo kwii-engile ezahlukeneyo kwaye ube nembono ecacileyo yokuba ukhuphiswano lumi phi kanye kanye.
Izaziso zeXesha langempela -Fumanisa ukuba ngubani okhankanyileyo kwaye baphi ixesha. IBrandMentions ikunika izaziso zexesha lokwenyani ngalo lonke ixesha ufumana ukukhankanywa okanye amakhonkco amatsha. Ngoku unokufikelela kwangoko kuyo yonke idatha ebalulekileyo enxulumene negama lakho kwiwebhu nakwiinethiwekhi zentlalo.
Bendikhe kusetyenziswa Iimpawu iinyanga ezimbalwa ngoku kwaye kumnandi. Ukukwazi ukubeka iliso kuyo yonke into kwiqonga elinye kuluncedo olukhulu. Kuthathe nje imizuzu embalwa ukuseta iakhawunti kunye nokongeza ezinye izihloko (kunye nendawo yam) ukumamela.
Ukufumana yonke i-imeyile yemihla ngemihla yile nto ndifuna ukuyijonga kwaye ndiphendule nakweyiphi na indawo yam ekhankanyiweyo ngegama okanye nge-URL:
Ukusukela ukuqala ukusebenzisa Iimpawu, Ndi:
Ndichonge olunye upapasho olwaba umxholo wam. Ukusukela oko bawususa umxholo kwaye abasayi kuphinda bawushicilele.
Uchonge intengiso ethile abachaphazelayo ebesabelana ngomxholo ebendingawulandeli okanye ndibonakalise uxabiso kuwo.
Ndichonge ezinye iiwebhusayithi ezinye izithethi esele zenziwe udliwanondlebe nazo okanye ezibhala kuzo-zinika ithuba lokuba ndifumane ukongezwa okungaphezulu.
Andikhathali ngohlalutyo lweemvakalelo okoko ukupapashwa kwam kungabhali nkonzo okanye nantoni na enempikiswano. Nangona kunjalo, ukuba uthengisa imveliso okanye inkonzo, ukuqonda ukuba ukujonga malunga negama lakho kulungile okanye kungalunganga kubaluleke kakhulu kwimpumelelo yeshishini lakho.
Qalisa ukulingwa okuSimahla
tags: ukubeka iliso kwi-backlinkukubeka iliso kwi-brandukuthengisaukongamela ukhuphiswanoulwazi lokhuphiswanoFacebookEsweni Facebookezineukubeka iliso kumacala amaneukubeka iliso kwi-hashtagesweni igamaLinkedInUkubeka iliso kwi-linkinkhankanya izilumkisoTwilleyukubeka iliso kwipinterestRedditukubeka esweni redditulawulo lwegamaesweni igamauvakaleloUhlalutyo lweemvakaleloImidiya yokuncokolaizaziso zosasazo zasekuhlaleniukubeka iliso kwimidiya yoluntuTwitteresweni twitteryoutubeUkujonga i-YouTube
Iingcebiso ezili-10 zokuYila iwebhusayithi yeArhente yokuThengisa izindlu eqhuba abaThengi nabaThengisayo ukuba bathathe inxaxheba
Ngaphaya kweDemografi: Iindidi zesahluko sabaphulaphuli esiPhambili esiqhuba ngokuzibandakanya ngokulinganayo